ယောဂကျင့်စဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ယနေ့ခေတ်တွင် ယောဂကျင့်စဉ်သည် ထူးခြားလှသည်မဟုတ်ဘဲ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပေမည်။ ရှေးခေတ်အိန္ဒိယလူမျိုးများ၏ သက်ရှည်ကျန်းမာနေထိုင် နည်းတစ်ခုအဖြစ် ကျင့်ကြံခဲ့ကြသော ယောဂကျင့်စဉ်များကို ယနေ့ခေတ်တွင် အားကစား တစ်ခုအသွင်အဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လက်ခံလေ့လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ယောဂ (Yoga) ဆိုသည့် စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ စည်းလုံးခြင်း Union ဖြစ်သည်။ ယောဂကျင့်စဉ်ကို ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လေရှူရှိုက်မှုတို့ စိတ်ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေသည့် အပေါ်မှာ အခြေခံဖော်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လေရှူရှိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ ဟန်ချက်ကို မျှစေသည်။ ယောဂကျင့်စဉ်မှာ အရေးပါသည့် အချက်(၅)ချက်နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မှန်ကန်ပြီး စနစ်က်သည့် လေရှူရှိုက်မှု၊
တရားထိုင်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ယောဂကျင့်စဉ်၏ အဓိကအနှစ်သာရကို စူးစမ်းမည်ဆိုပါက လူမှု့ဘဝ၏ အဓိကအချက်ကြီး(၄-ချက်)ဖြစ်သော-
ခံယူချက်များပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဆိုသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိကြောင်းသိရပေသည်။
ယောဂကျင့်စဉ်များ၏ အဓိကဦးတည်ချက်များမှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ဗဟိုချက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိမိအကြား ပြီးပြည့်စုံသော အချိုးညီ သဟဇာတဖြစ်စေရန် ချိန်ညှိုပေးနေသော ကျင့်စဉ်များဖြစ်ပေသည်။
ယောဂကျင့်စဉ်ကို မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခြင်း အားဖြင့် တောင့်တင်းနေသော ကြွက်သားများ ပြေလျော့သွားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေခြင်း၊ တွယ်ဆက်ထားသော အဆစ်အမြစ်များနှင့် အရွတ်များ ကွေးနှိုင် ဆန့်နှိုင်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်မှု စွမ်းအား တိုးတက်ခြင်း စသော သက်ရှည်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်စေသည့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ 
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့ကို ဇွန်လ (၂၁)ရက်အား သတ်မှတ်ထားလေသည်။ 
↑ နန်းအိအိဇာ၏ ယောဂကျင့်စဉ်နှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာ (၁၀၁)နည်း စာအုပ်မှ
↑ မန္တလေး နေ့စဉ်သတင်းစာ၊ (၂၀. ၆. ၂၀၁၈)စာ - ၈
Wikimedia Commons တွင် Yoga နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယောဂကျင့်စဉ်&oldid=696514" မှ ရယူရန်